Daani’eel Gammadaa mana nama dhuunfaatti hidhamee jira | OROMOTV
Daani’eel Gammadaa mana nama dhuunfaatti hidhamee jira
Artist Daani’eel Gammadaa mana nama dhuunfaatti hidhamee jira
(OROMOTV)Finfinnee Naannoo ‘Addis Safar’ jedhamuu guyyoota muraasa dura Poolisii Humna Addaa Oromiyaatiin kan butame Artist Daani’eel Gammadaa (Karadeemaa), namoota biroo shan waliin Buraayyuu mooraa nama dhuunfaa keessati hidhamee jiraachuu maatiin OMN-tti himan.
Artist Daani’eel Gammadaafi Obboleessisaa Yoonaas Gammadaa, akkasumas namoonni kan biroo lama dhalootaan Aanaz Gindabarat ta’uu himataniifi, Ijoolleen biroon lama Godina Iluu Abbaa Boor irraa qabaman, walumaa galatti dargaggoonni jaha yeroo ammaa Buraayyuu mooraa nama dhuunfaa keessatti hidhamanii jiraachuu, maatiin poolisiirraa odeeffanne jechuun OMN-tti himaniiru.
Akka miseensi maatii OMN dubbise himtutti, guyyaasaan qaban Poolisii Humna Addaatu konkolaataatiin isaan bute. Gaafas irraa eegaluun garuu maatiin bakka hedduu deemuun isaan barbaadaa turanis argachuun hin danda’amne.
Guyyaa jalqabaa Finfinnee naannoo Siddist Kiiloo waajjira DhDUO duraanii, kan yeroo ammaa Koomishiinii Poolisii Oromiyaa ta’etti geeffamanii turan kan jettu miseensi maatii Daani’eel, ergasii as bakki isaan itti hidhaman beekamaa hin turre jechuun himti.
Kaleessa odeeffannoo iccitiin poolisiirraa arganneen ammoo, Buraayyuutti mana dhuunfaa Komaandara poolisii maqaansaa hin hamamne tokkotti hidhamanii jiraachuu mirkaneeffanne jette.
Artist Daani’eel Gammadaa hojiilee aartiin cinatti hojii tola ooltummaa adda adda hojjechuun kan beekamu yoo ta’u, addatti deggarsa Uummata Walloo qe’eefi qabeenya isaaniirra sababa miliishaa Amaaraatiin buqqa’aniif taasisaa turuusaaf doorsifni adda addaa irra qaqqabaa akka ture, OMN maatii dubbisuun gabaasuunsaa ni yaadatama.